နွားကို အမဲသားလို့ ခေါ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း - San Thitsa
နွားကို အမဲသားလို့ ခေါ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
နွားကို အမဲသားလို့ ခေါ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းလေးပါ (ဗဟုသုတဖြစ်ဖတ်ကြည့် )
နွားကို အမဲသားလို့ ခေါ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းလေးပါ…ဘာကြောင့် နွားသားကို အမဲသားလို့ခေါ်ကြသလဲ….အသားစားသတ္တဝါထဲ၌တွင်..သရဲ.သဘ္ဘက်ဘီလူး. ကျား.ခြင်္သေ့..တခြားသောမကောင်းဆိုးဝါးမိစ်ဆာများမှာ…
အသားထဲ၌..နွားသားကိုသာ အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။နွားသား၏ အနံ့မှာလဲအညှီဆုံးဖြစ်သလို..နွားသားစားခြင်းကြောင့်လဲ. သွေးသားအားကောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ကြက်သေတော့.ကြက်သား…ဝက်သေတော့ဝက်သားလို့ခေါ်ကြသည်မှာအမှန်တိုင်းပင်ဖြစ်သော်လည်း..
စားမက်ဖွယ်ရာဟုသတ်မှတ်ထားသော အသားဖြစ်၍ အမဲသားဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်…..ထို့သို့..အမဲသားကို.ကြိုက်နှစ်သက်သောစားသောက်ကြသော.သာမှန်လူသားတို့၌တွင်..ထိုသူတို့၏.ခန္တာတွင်လဲ.
အင်မတန်.ညစ်နွမ်းခြင်း အနံ့သက်.အညှီနံများ .စွဲနေလေ၏.မိမိကိုယ်မိမိမသိသော်လည်း..အထက်မှာဖော်ပြထားသည့်..အမဲသားကို.မက်မောနှစ်သက်စွာ.ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ပေရေလာကသားမ်ား..ကျားရဲတိရိစ္ဆာန်များ..အစိမ်းသေ.သရဲ.သဘ္ဘက်.ဘီလူးများမှ
ထိုအသား၏အနံ့ကို.ယဉ်ပါးနေပြီဖြစ်၍ထိုအသားကိုစားသောက်ထားသည့်. သာမန်လူသားများကို.အလွယ်တကူသိရှိကြ၏အလွယ်တကူ အနံ့ရ၏။ထိုအနံ့ရရှိသောလူသားတို့ကိုလဲ…ထိုမိစ္ဆာတို့က..အမဲသားကိုကြိုက်နှစ်သက်မက်မောသလို..
မားတဲ့သူများထက်…လွယ်စွာတိုက်ခိုက်ဖြတ်စည်းနိုင်၏…ထိုအသားကိုစားသုံးသောသူတို့မှာလဲ..ကံနိုပ်.ဉာဏ်နိပ်၏..ထိုကြောင့်ပင်..ဤနွားသား.ခေါ်အမဲသားကို..သူတော်ကောင်းတို့လောကီပညာရှင်တို့ တရားအားထုပ်သော.အရိယာသူတော်စင် ပုဂ္ဂိုလ်တို့က ရှောင်ကျဉ်၍.
နှားကို အမဲသားလို့ ချေါရတဲ့ အကွောငျးရငျးလေးပါ (ဗဟုသုတဖွဈဖတျကွညျ့ )
နှားကို အမဲသားလို့ ချေါရတဲ့ အကွောငျးရငျးလေးပါ…ဘာကွောငျ့ နှားသားကို အမဲသားလို့ချေါကွသလဲ….အသားစားသတ်တဝါထဲ၌တှငျ..သရဲ.သဘ်ဘကျဘီလူး. ကြား.ခွင်ျသေ့..တခွားသောမကောငျးဆိုးဝါးမိဈဆာမြားမှာ…
အသားထဲ၌..နှားသားကိုသာ အကွိုကျဆုံးဖွဈသညျ။နှားသား၏ အနံ့မှာလဲအညှီဆုံးဖွဈသလို..နှားသားစားခွငျးကွောငျ့လဲ. သှေးသားအားကောငျးခွငျးဖွဈသညျ။ကွကျသတေော့.ကွကျသား…ဝကျသတေော့ဝကျသားလို့ချေါကွသညျမှာအမှနျတိုငျးပငျဖွဈသျောလညျး..
စားမကျဖှယျရာဟုသတျမှတျထားသော အသားဖွဈ၍ အမဲသားဟုချေါဝျေါကွသညျ…..ထို့သို့..အမဲသားကို.ကွိုကျနှဈသကျသောစားသောကျကွသော.သာမှနျလူသားတို့၌တှငျ..ထိုသူတို့၏.ခန်တာတှငျလဲ.
အငျမတနျ.ညဈနှမျးခွငျး အနံ့သကျ.အညှီနံမြား .စှဲနလေေ၏.မိမိကိုယျမိမိမသိသျောလညျး..အထကျမှာဖျောပွထားသညျ့..အမဲသားကို.မကျမောနှဈသကျစှာ.ကွိုကျနှဈသကျသညျ့ပရေလောကသားများ..ကြားရဲတိရိစ်ဆာနျမြား..အစိမျးသေ.သရဲ.သဘ်ဘကျ.ဘီလူးမြားမှ
ထိုအသား၏အနံ့ကို.ယဉျပါးနပွေီဖွဈ၍ထိုအသားကိုစားသောကျထားသညျ့. သာမနျလူသားမြားကို.အလှယျတကူသိရှိကွ၏အလှယျတကူ အနံ့ရ၏။ထိုအနံ့ရရှိသောလူသားတို့ကိုလဲ…ထိုမိစ်ဆာတို့က..အမဲသားကိုကွိုကျနှဈသကျမကျမောသလို..
မားတဲ့သူမြားထကျ…လှယျစှာတိုကျခိုကျဖွတျစညျးနိုငျ၏…ထိုအသားကိုစားသုံးသောသူတို့မှာလဲ..ကံနိုပျ.ဉာဏျနိပျ၏..ထိုကွောငျ့ပငျ..ဤနှားသား.ချေါအမဲသားကို..သူတျောကောငျးတို့လောကီပညာရှငျတို့ တရားအားထုပျသော.အရိယာသူတျောစငျ ပုဂ်ဂိုလျတို့က ရှောငျကဉျြ၍.
← “ရှိတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ ကြိုးစား တီထွင်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက စက်ရုပ်လေး လမ်းလျှောက် စမ်းသပ်မှု အောင်မြင်(ရုပ်သံ)”
သခင်ဖြစ်သူဆုံးသွားပြီးနောက် သခင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို အမွေဆက်ခံပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အချမ်းသာဆုံးခွေးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ကံကောင်းလွန်းတဲ့ခွေးလေး →
ပုတီး (၉) ပတ်စိပ် အဓိဌာန်(၉) ရက်ဝင်ပြီးသင်တို့ရဲ့ကံဆိုးမှုတွေပပျောက်သွားအောင် ပြုလုပ်ကြရအောင်